Monday September 24, 2018 - 16:20:56 in Wararka by Super Admin
Ciidamo hubeysan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markale weerar kamiin ah u dhigay maleeshiyaat ka tirsan DFS oo ku socdaalayey wadada xeebta ah ee isku xirta Muqdisho iyo Marka, waxaana lagu soo waramayaa in khasaare isugu jira d
Ciidamo hubeysan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa markale weerar kamiin ah u dhigay maleeshiyaat ka tirsan DFS oo ku socdaalayey wadada xeebta ah ee isku xirta Muqdisho iyo Marka, waxaana lagu soo waramayaa in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay weerarkaasi.
Wararka ayaa sheegaya in weerarka loo dhigay gaari Kaarib iyo gaari Cabdi Bile ah oo ay wateen ciidamo ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho kuna sii jeeday saldhigga maleeshiyaatka Soomaalida ee Dhanaane.
Sarkaal u hadlay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegay in dagaalyahanadooda ay u suuragashay in ay gubaan gaariga Kaaribka ah balse uu si dirqi ah kaga baxsaday gaariga Cabdi Bilaha ah oo ay la socdeen ciidamo badan.
Cabdi Bilaha ayaanan u istaagin saaxiibadooda uu weerarku qabsaday, waxaana isagoo baxsad ah uu gaaray saldhigga Dhanaane sida uu sheegay Sarkaalka u hadlay Al-Shabaab.
"Gaariga Kaaribka ah ayaa gabi ahaanba meesha ku gubtay, ciidankii saarnaa oo dhana goobta ayey ku wada halaagsameen" ayuu yiri.
Weerarkan ayaa imaanaya iyadoo maalintii shaley qarax ka dhacay isla wadadaaas lagu burburiyey gaari James ah oo ay wateen maleeshiyaatka DFS, islamarkaana lagu dilay ugu yaraan 8 askari, halka lix kalena lagu dhaawacay.
Dhanka kale, Faafaahino ayaa laga helayaa dagaal xoogan oo xaley ciidamada mujaahidiinta Al-Shabab ay ku qaadeen fariisimaha maleeshiyaatka DFS ee degmada Qoryooleey.
Weerarkaas waxaa lagu dilay ugu yaraan afar askari, waxaana lagu dhaawacay tiro kale sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta oo la hadlay Idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka Xarakada Al-Shabaab.